FAHATRARANA ZAVA-MAHADOMELINA :: Toaka gasy arivo litatra sarona tao an-tranona sefo fokontany • AoRaha
FAHATRARANA ZAVA-MAHADOMELINA Toaka gasy arivo litatra sarona tao an-tranona sefo fokontany
Nogiazana ny toaka gasy maherin’ny arivo litatra sarona tany Besely, kaominina Mandabe, distrikan’i Mahabo, tamin’ny alatsinainy lasa teo. Tao an-tranona sefo fokontany no nahatrarana an’ireo toaka voarara ireo,araka ny tatitry mpitandro filaminana. Tsy tratra tao an-toerana ilay lehiben’ny fokontany. Mbola karohina ity farany amin’izao fotoana izao.
Zavatra hafa no anton-dian’ireo zandary avy any Manja, tany amin’ity tanàna antsoina hoe Besely ity. Tsy maintsy nandalo tany amin’ny lehiben’ny fokontany izy ireo, tamin’io alatsinainy io. «Tonga tany Besely nitady lehilahy roa voatondro ho dahalo raindahiny izahay. Nanatona ny sefo fokontany hilaza izany izahay no sendra zavatra hafa. Hita teo an-tokotany sy tao an-tranony ireo toaka voarara marobe nafatratra tao anaty daba sy barika. 1 170 litatra no fitambaran’izany », hoy ny zandary any Manja.
Nanontany ny olona tratran’izy ireo tao amin’io trano nahitana toaka gasy io ny mpitandro filaminana. Tamin’izany no nahafantarana fa ny sefo fokontany no tompon’ ireo entana ireo, araka ny fanazavana voaray hatrany.
Fampitaovana zandarmaria Manaraka ny hiaka farany ireo fiaramanidina kely baikoin-davitra
Samihafa • Tapatapany
Ady amin’ny koli­koly
Malagasy any Kenya
FITSARAM-BAHOAKA TANY FENOARIVO ATSINANANA :: Tsy mbola misy olona voasambotra tamin’ny fahafatesana pôlisy telo lahy
HALATRA :: Ankizilahy tsy ampy taona tratra namaky trano